Waxyaabaha kale ee lagu beddeli karo hilibka hilibka lagu dubo | Bezzia
Pau Heidemeyer | 03/05/2021 16:00 | Nafaqeyn, Caafimaadka
Cimilada wanaagsani waxay bilaabmaysaa waxaan raadineynaa wiig walba oo usbuucan si aan u helno hilib dubis oo aan ugu raaxeysanno hilib wanaagsan Taabadalkeed, yaa raacaya cunto si adag u cunaya khudradda, waxay umuuqataa inaysan u raaxeysan doonin sida kuwa hilibka cuna.
Tani gebi ahaanba run maahan, maxaa yeelay hilibka la dubay ayaa qaadi kara dalabaadka khudaarta, waana inuu noqdaa mid lagu raaxeysto. Haddii aad rabto inaad ogaato waxyaabaha kale ee ugu habboon, Waan kuu sheegi doonaa markaa.
Ahaanshaha khudradeed waxay leedahay qaab nololeed ka duwan, iyagana sidoo kale waxay ku raaxeysan karaan hilibka la dubay qaab ku habboon xulashooyinka cuntada.
Ikhtiyaarrada la kala qaadi karo ayaa ah noocyada khudradda caadiga ah, hilbaha vegan ee leh boqoshaada, roodhida legume ama khudradda la shiilay ee leh sooska khudradda. Hilib-cunista khudradda ayaa had iyo jeer ka caafimaad fiicnaan doonta illaa inta aad maskaxda ku hayso waxa aad ku raacaysomaadaama xawaashidu ay noqon karaan "xun" sida kuwa hilibka loo isticmaalo.
Haddii aad rabto inaad ogaato fursado badan oo aad ku samayso a khudradda la dubayWaxaan hoosta kuugu sheegi doonaa si aad maskax badan ugu heysato, lagana yaabo inaadan waligaa ku dhicin.
1 Beddelka ugu fiican ee hilibka hilibka lagu dubto
1.1 Khudaarta cagaaran
1.2 Faylasha Seitan
1.3 Khudaarta cufan
1.4 Burgeeti Veggie
1.5 Galley la shiilay
1.6 Salad diirran
1.7 Dharka yogurt
2 Ha yareysan khudaarta hilibka lagu dubto
Beddelka ugu fiican ee hilibka hilibka lagu dubto
Waxaa jira fursado fara badan oo lagu abaabulo hilibka hilibka lagu dubto. Intaa waxaa sii dheer, waxaad heli doontaa xulashooyin qumman oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxeysatid gastronomy dhinacyo kale.
Kalluumeyaasha ayaa sidoo kale laga samayn karaa khudaar keliya, kuwani sidoo kale waxay ku dhalaaleen ur iyo dhadhan ay reebtay ololka. Intaa waxaa dheer, had iyo jeer waxay u keentaa midab badan oo kala duwanaanta. Isticmaalka khudaartaani waa mid caan ah: basasha, basbaaska cagaaran iyo casaanka, yaanyada, aubergines ama zucchini.
Mushrooms sidoo kale waxay kufiicnaan karaan dubista. Waa inaad u kala jajabisaa si aad u gelisid ulaha dhaadheer ama alwaax si aad isugu soo ururiso iskudhafka sidaad u jeceshahay. Markay karsanayaan, waxaad ku dari kartaa xoogaa dhir udgoon ah iyo saliid si aad dhadhan fiican u yeelatid.
Haddii aad rabto inaad ku darto tiro borotiin ah iskudhafyadan waad awoodaa ku dar xabadaha tofu adag. Badeecadani, oo ah nooc ka mid ah soosaarida, waxay u adeegtay inay kordhiso qiyaasta borotiinka ee dad badan oo go'aansada inay noqdaan khudradda ama khudradda.
Sida tofu, waxaad samayn kartaa fillets seitan, cuntada oo ah natiijada ka soo baxda qamadiga loo yaqaan 'gluten gluten' oo lagu helo iyadoo la miiro bur iyo dhaqid ku xigta si loo soo saaro istaarijka. Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa saddex jeer ka badan borotiinka hilibka, ugu yaraan 75%.
Si aad u sameysid fillets seitan waxaad raaci kartaa cuntadan yar.
1 qayb burka digaaga.
2-3 qaybood oo bur ah qamadi.
1 qayb rootiga rootiga ama galleyda.
Isku qas biyo, maraq khudradda, iyo maraqa soy.
Faa'iidooyinkan waxaa lagu carfin karaa dhir udgoon, waad qaabaynaysaa waxaadna geyn doontaa dubista. Markaa seitanku wuxuu noqon doonaa mid aad u casiir badan, jilicsan oo leh cunno dhadhan fiican leh.
Waa lagugu dhiirigelin karaa inaad u diyaariso khudradda cufan ee hilibka dubitaanka khudradda. Waxaad isticmaali kartaa zucchini ama yaanyo, tusaale ahaan. Waad ka buuxin kartaa isbinaajka ama kareemka jilicsan, oo waad ku dari kartaa tofu si aad u kordhiso qaadashada borotiinka.
Eggplants iyo boqoshaada Sidoo kale waa la buuxin karaa oo waxay kufiican yihiin hilibka dubitaanka. Haddii aad tahay lacto-vegetarian waxaad isticmaali kartaa farmaajo si aad uga dhigto mid casiir badan.
Burgers badanaa waa boqoradaha hilibka wax lagu dubto kiiskan, iyaguna way noqon karaan. Burger khudradeedka waxaa laga sameeyaa badarka iyo digir. Waxaa lagu daraa khudradda, ha noqoto isbinaajka ama karootada tusaale ahaan. Tani waxay iyaga siinaysaa qaab quruxsan iyo dhadhan fiican.
Chickpeas ama misir ayaa loo isticmaali karaa sida digiraha, marka lagu daro, waa loo diyaarin karaa sidii inay ahaayeen falafel la dubay. Waxyaabaha qadiimiga ah ayaa lala socon karaa chives, toon, dhir, basbaas iyo milix.
Haddii aadan aheyn taageere xagga digiraha, waxaad sidoo kale sameyn kartaa hamburgers ku saleysan bariis, digir ama oats. Isticmaal dhammaan badarka aad jeceshahay, samee baaritaankaaga kuna raaxeyso jikada.
Galley la shiilay
In kasta oo aan xisaabta lagu darin, hadhuudhkii la kariyey ee dusha ka samaysan ayaa ku habboon in lagu dubto hilibka dubitaanka. Galeyda waxay leedahay astaamo nafaqo oo culus, iyo mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loo qaato waa barbecue.
Galeyda had iyo jeer waxay la socotaa hilib dubista khudradda wanaagsan. Waad ku cadaadin kartaa cob dhan saliida kahor intaadan ku duubin aluminium. Dhig dusha sare, u rog 15 daqiiqo si ay si fiican ugu dhammaato.
Waxaad sameyn kartaa saladh dhinac ah oo udub dhexaad u ah dareenka oo dhan, oo leh yaanyo, saladh, cagaar, qajaar, iyo dhamaan khudaarta aad rabto.
Salad romaine waa mid ku habboon samaynta salad wanaagsan, wadnuhu waa macaan yahay oo waa cusub yahay. Sidoo kale, haddii aad ku raacdo saladhka labiska wanaagsan, waxaad heli doontaa saladh kaamil ah. Gali saliid wanaagsan, khal khalka ah, milix, basbaas iyo xoogaa dhir udgoon ah.
EWaa muhiim inaad cabirto waqtiga karinta ee saladhan diiran, maaddaama aysan ku dheeraan karin karinta, tusaale ahaan, qajaarku wuxuu noqon karaa hal daqiiqo, laakiin labada daqiiqo ee soo socota, haddii aad waqti ku qaadato, kuleylka ayaa jilcinaya khudradda in badan.
Ugu dambeyntiina, waxaad ku khamaari kartaa suugada yogurt-ka ee guriga lagu kariyo oo kuu oggolaanaysa inaad khudaartaada siiso taabasho gaar ah oo iyagu sidaa uma eka. Yoogurtu waxay u oggolaaneysaa xulashooyin badan, waxaa lagu qasi karaa toon iyo qajaar si looga dhigo tzaiziki-ga caadiga ah, sidoo kale waxaad ku raaci kartaa caano fadhi suugo soy ah si aad u siiso taabasho ka duwan.
Waxa kale oo aad isku dari kartaa yogurt, yaanyo la jarjarey, basal iyo koryander, sidaa darteed waxaad heli doontaa jeex tamaandho ah oo nooca Hindida hodan ku ah. Iyagu waa xulashooyin hagaagsan si aad ulasocotid khudaarta iyo hamburgers-ka aad horey udiyaarisay.
Ha yareysan khudaarta hilibka lagu dubto
Sidaad aragtay, waxaa jira waxyaabo badan oo badal ah oo aad ku sameyn karto hilibka hilibka lagu cuno, maxaa yeelay waxaan ka wada fikirnaa hilibka waxna kama badna hilibka. Laakiin khudaarta, hamburgers, skewers ama saladhku way lafiican karaan sida gabal hilib ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Waxyaabaha lagu beddeli karo si loo sameeyo hilibka khudradda la dubto